कञ्चन र अनिशाको प्रेमको अन्त्य कसरी भयो? कञ्चन र अनिशाको घरमै भोजराज पुग्दा यस्तो देखियो-भिडियो हेर्नुहोस - Nepali in Australia
March 9, 2021 autherLeaveaComment on कञ्चन र अनिशाको प्रेमको अन्त्य कसरी भयो? कञ्चन र अनिशाको घरमै भोजराज पुग्दा यस्तो देखियो-भिडियो हेर्नुहोस
चितवनवाट काठमाडौ पुगेर कञ्चनको आमाको अगाडी विवाह गरेको भोलीपल्टै बेहुलीले आफ्नो माइतीको दवावमा कञ्चनलाई आफुले प्रेम नगरेको बताइदिइन् । उनलाई प्रहरी कार्यालय लगियो । प्रेमिकावाट अलग गराइयो । त्यसपछि उनीहरुको सम्बन्धमा परिवर्तन आयो ।
त्यो सबै अवस्थाको सामना कञ्चनले सहन सकेनन् । कोठामा फर्किएर वि ष खा ए । करिब दुई महिनाको उपचार पछि उनको निधन भयो । आमाले एक्लै हुर्काएको छोरा गुमाउनु परेपछि उनको अवस्था निकै बेहाल भएको छ ।
जिवनको एक मात्र सहारा ति आमाले गुमाएकी छन् । श्रीमानको सहयोग समेत नपाएकी कञ्चनको आमाले आवजाट एकमात्र सहारा रहेका छोरा पनि गु मा उनु परेको हो ।